Culimaa’udiin damacsan iney dhexdhexaadiyeen maamulada Puntland iyo Somaliland
GAROWE- Waxaa jira Culima’udiin Reer Puntland ah oo wada dadaalo ay damacsan yihiin iney ku qaboojiyan colaada u dhexeysa Puntland iyo Somaliland kuwasoo kulamo la qaatey waar ka tirsan waxgaradka ku sugan magaalada Garowe.
Qaar ka tirsan Wadaadadaan ayaa habeenkii xalay kulan la qaatey odayaal ku shirsanaa Hotel ku yaal magaalada Garowe waxayna u gudbiyeen iney baaq ka wadaan dhigooda Somaliland iyo Ganacsato.
Waxay u sheegeen Culimadaan odayaashii ay la kulmeen in Ganacsatada iyo Wadaaadada Somaliland Madaxweyne Muuse Biixi ka haystaan kalsooni ah inuu aqbalayo heshiis walba oo nabadeed ee loo soo gudbiyo islamarkaana doonayaan In dhinaca Puntland laga helo ogolaansho wadahadalo nabadeed.
Sida wararka uu ku helayo warsidaha GO odayashaan ayaa u sheegey Culimada iney wanaagsan tahay nabaddu balse hadda go’aan arintaas ku saabsan aysan siin karin madaama iyaga uusan ka go’in balse jawaab ku soo celin doonaan.
Kulankan ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shaley dowlada Pubtland beenisay hadal kasoo yeerey Wasiirka arimaha dibada Somaliland kasoo ahaa in ay jiraan wadahadalo beesha caalamku wado oo u dhexeeya Puntland iyo Somaliland.
Puntland ayaa ku xirtey wadahadal dhexmara labada maamul ah ku xiran tahay iyagoo ka baxa Gobolada Sool iyo Sanaag kuwasoo qaar ka tirsan ciidamadooda ku sugan yihiin.
Madaxweynaha Somaliland ayaa tababar usoo xiray Ciidamo cusub xilli xiisadda Tukaraq...